နောက်ခံသို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောအရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုပြန်လည်ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံး app Androidsis
သင် app တစ်ခုရှာနေသည် ဓါတ်ပုံများကိုပြန်လည်ထိတွေ့ နောက်ခံဖယ်ရှားပစ်ရန်စီစဉ်သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သောအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ရာအားဖယ်ရှားပါ? သင်သည် Photoshop ကဲ့သို့သောဂရပ်ဖစ်တည်းဖြတ်ရေးပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ကူးမရှိသော်လည်းသင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမသိဘဲတည်းဖြတ်ခြင်းစွမ်းအားကိုသင်လိုအပ်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်မေးခွန်းနှစ်ခုအနက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးကိုပင်“ ဟုတ်ကဲ့” ဖြေဆိုပါကသင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ပေးမည့်အနေနှင့်သင်မှတ်ချက်များမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Luis Calle, သင်ရှာဖွေနေသည်သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်ဆိုပါကစတိုင်၏အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာဖြစ်သည် မလိုချင်တဲ့နောက်ခံ၊ အရာဝတ္ထုတွေ (သို့) လူတွေကိုတောင်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဓါတ်ပုံတွေကိုပြန်ထိပါ.
App ကို ဓါတ်ပုံများကိုပြန်လည်ထိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအကြောင်းအရာများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမည်တစ်ခုဖြင့်ဖျက်ပစ်ခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း Luis Calle မှအကြံပေးသည့် application တစ်ခုဖြစ်ပြီး Google Play Store ၏အမည်အောက်တွင်အခမဲ့ရနိုင်သည် နောက်ခံ Eraser ကို သို့မဟုတ်ပဲ "ရန်ပုံငွေမူကြမ်း", အခမဲ့ app ကိုပေါင်းစည်းကြော်ငြာများနှင့်အတူပေမယ့်ပေမယ့် application ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်လုံးဝနှောင့်အယှက်မပေးပေမယ့်။
1 Background Eraser ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 နောက်ခံ Eraser မှနောက်ခံ Eraser ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသမျှ
Background Eraser ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
နောက်ခံ Eraser ကို
ရေးသားသူ: handyCloset Inc က
နောက်ခံ Eraser မှနောက်ခံ Eraser ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသမျှ
အက်ပလီကေးရှင်း၏အမည်ကိုယ်တိုင်ကဖော်ပြသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်ရန်ပေးသည်ဆိုသော်ငြား၎င်းသည်ရိုးရိုးရန်ပုံငွေမူကြမ်းမျှမဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားပြောပြရန်လိုအပ်သည်မှာဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းမှာလျှောက်လွှာဖြစ်သည်။ နောက်ခံ Eraser သည်မည်သည့်အရာဝတ္ထု၊ လူ၊ တိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်အထွေထွေမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုံးဝဖျက်သိမ်းသည်အထိဖယ်ရှားနိုင်သည် ငါတို့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းလျှောက်လွှာနှင့်အမြင့်ဆုံးသို့ချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ထဲတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ အစွမ်းထက်သောဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာသည်အရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်နောက်ခံသို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုသဲလွန်စမချန်ဘဲဖယ်ရှားလိုသောအရာအားလုံးနှင့်၎င်းတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာဗဟုသုတနည်းသူများအတွက်ဤအရာအားလုံးသည်အလိုအလျောက်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းမုဒ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အတူအဆင်ပြေသည်။ လျှောက်လွှာများ။
အရှင်, နောက်ခံ Eraser ကို ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မရှိဖြင့်ပေးထားသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲသူများအားအသုံးပြုမှုအကြောင်းပြောပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အစွမ်းထက်အလိုအလျှောက်ဖယ်ရှား filter ကို ရုပ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှအရောင်ကိုသင်ရွေးလိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်လုံးဝဖျက်လိုက်ပြီးတဆက်တည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ ရွေးချယ်ထားသောအရောင်ကိုသာထိုအရောင်အားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲအချင်းချင်းထိတွေ့သည့်ဓာတ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။
ငါတို့သည်ဤအလိုအလျှောက် filter ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် ပိုပြီးအတုံးကိုဖုံးလွှမ်းသို့မဟုတ်ထွက်ခွာနိုင်အောင်ပြင်းထန်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထိန်းညှိ ဓာတ်ပုံမှနုတ်ရန်ရွေးချယ်ထားသောအရောင်၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ပိုမိုတိကျစေရန်နှင့်နောက်ခံသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားလုံးဝဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်လုံးဝဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မကျန်ရှိပါ။ ရုပ်ပုံအတွင်းပိုင်းချဲ့ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုသည်ဖြစ်နိုင်လျှင် ပို၍ တိကျပြီးရုပ်ပုံတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှမချန်ထားစေရန်ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်မှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်နောက်ဆုံးအဆင့်နှင့် retouched image ကိုသိမ်းပြီးသောအခါ၊ အချောပုံကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားသောအစွမ်းထက်ချောမွေ့ filter ကို, ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်အားနည်းသောပြင်းထန်မှုတွင်နံပါတ်တစ်ကိုအသုံးပြုသော filter တစ်ခုမှာအဆင့် ၅ အထိချောမွေ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာငါပြောခဲ့သကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဤအစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုထဲမှအသေးစိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ၊ နောက်ခံ၊ လူ (သို့) တိရိစ္ဆာန်အရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သမျှတိတိကျကျဖြစ်သဖြင့်၎င်းဓာတ်ပုံတွင်လုံးဝမတည်ရှိခဲ့ပုံရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » နောက်ခံသို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောအရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုပြန်လည်ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံး app